गर्भवस्थाको शुरुवाती दिनमा भुलेर पनि नखानुहोस् यी ४ चिज, नत्र हुन्छ गर्भपतनको खतरा ! – Jagaran Nepal
गर्भवस्थाको शुरुवाती दिनमा भुलेर पनि नखानुहोस् यी ४ चिज, नत्र हुन्छ गर्भपतनको खतरा !
काठमाडौँ । गर्भावस्था एक यस्तो समय हो जसमा तपाइँले आफ्नो सबै भन्दा धेरै हेरचाह गर्नु पर्छ। गर्भावस्था को समयमा महिलाहरु जे पनी खान्छन्, यसको सीधा असर उनीहरुको पेटमा भएको बच्चालाई प्रभावित पार्दछ । त्यसैले महिलाहरु लाई गर्भावस्था को समयमा बच्चा को स्वास्थ्य र भलाई को लागी पौष्टिक खाना खाने सल्लाह दिइन्छ। भनिन्छ कि गर्भावस्था को पहिलो तीन महिना महिलाहरु को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
किनकी शुरुवाती दिनहरुमा गर्भपात हुने खतरा सबैभन्दा धेरै हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा यो कुराको ख्याल राख्नुहोस् कि गर्भवस्थामा यी पाँच चिजहरु भुलेर पनि नखानुहोस् किनकी यसको लापरवाहीले मिसकेरेज पनि हुनसक्दछ ।
एलोवेरा जुस : एलोभेरा धेरै रोगहरु लाई हटाउन मा उपयोगी छ। तर गर्भावस्था को समयमा, महिलाहरुले एलोवेरा को रस भुलेर पनि उपभोग गर्नु हुँदैन । किनभने यो विश्वास गरिन्छ कि गर्भावस्था को समयमा एलोवेरा को रस पिउनु विष जस्तै हो। गर्भावस्थामा एलोभेराको जुस पिउँदा पेल्विक क्षेत्रमा रगत बग्न सक्छ, जसले गर्भपतन गराउन सक्छ।
काँचो अण्डा को उपभोग : गर्भावस्था को प्रारम्भिक दिन मा, काँचो अण्डा वा यो बाट बनेको चीजहरु बाट खान बच्नु पर्छ। किनकी यसमा फुड पोइजनको खतरा बढ्न सक्छ । यसले बच्चालाई हानि पुर्‍याउन सक्छ। तर पकाए पछि अण्डा को सेतो र पहेंलो भाग गर्भवती महिलाहरु को लागी सुरक्षित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा गर्भवतीले गर्भावस्था को समयमा पकाएको अण्डा खानु पर्छ।
मेवा :गर्भावस्था को प्रारम्भिक दिन मा हरियो वा पाकेको मेवा खान बाट बच्नुपर्दछ । किनकि यसले गर्भपात पनि हुन सक्छ। हामी तपाईंलाई बताउँछौं, हरियो र आधा पाकेको मेवामा एन्जाइम हुन्छन्, जसले गर्भाशयमा संकुचन ल्याउन सक्छ र गर्भपात हुन सक्छ। मिडिया रिपोर्टहरु को अनुसार, कच्चा मेवामामा मिरीड एंजाइम र पस हुन्छ, यसले गर्भाशय मा ऐंठन पैदा गर्न सक्छ जसले गर्भपात को समस्यालाई बढाउँछ ।
तिल: गर्भावस्था को बेला महिलाले तिल धेरै मात्रामा खानु हुदैन किनकि यो गर्भपात को खतरलाइलाई बढाउँछ। महमा मिसाइएको तिल नखानुहोस्। कालो तिल गर्भावस्था को तीन महिना पछि खाईन्छ किनकि यसले सामान्य डिलीवरीमा मद्दत गर्दछ ।